Kulamo Lagu Xoojinayo Iskaashiga Somaliland Iyo Itoobiya Oo Jigjiga Lagu Qabtay |
Kulamo Lagu Xoojinayo Iskaashiga Somaliland Iyo Itoobiya Oo Jigjiga Lagu Qabtay
Hargeysa (GNN)-Dawladaha Somaliland iyo Itoobiya, ayaa shir ballaadhan ku leh magaalada Jigjiga ee xarunta degaanka Soomaalida Itoobiya, iyadoo wefti heer wasiir ah oo ka socda Somaliland gaadheen halkaas maalintii Sabtida.
Weftiga Jamhuuriyadda Somaliland oo ka kooban Wasiirrada Arrimaha Dibadda Md. Maxamed Biixi Yoonis, Arrimaha Gudaha Md. Cali Maxamed Warancadde iyo xubno kale, waxa madaarka diyaaradaha ee magaalada Jigjiga ku qaabilsay masuuliyiin sare oo ka tirsan dawladda degaanka Soomaalida ee Itoobiya.
Sida lagu baahiyey telefishanka ESTV, Wasiirul-dawlaha Arrimaha Dibadda ee dawladda Fedaraalka ah ee Itoobiya Mr. Berhane Gebre-Christos iyo xubno kale oo xilal kala duwan ka haya Itoobiya, ayaa shir la yeelanaya weftiga ka socda Somaliland, kaasoo furmay Axaddii shalay, iyadoo labada dhinac ka wadahadleen qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin ganacsiga iyo ammaanka labada dal u dhexeeya.
Ma jiro war faahfaahsan oo labada dawladood ka soo saareen ujeedada shirka magaalada Jigjiga, balse qoraal kooban iyo sawirro lagu faafiyey barta Twitter-ka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda Jamhuuriyadda Somaliland xalay oo wargeyskaJamhuuriya arkay, ayaa lagu sheegay in wefti sare oo ka socda dawladda Somaliland si diiran loogu qaabilay magaalada Jigjiga.
“Wefti heer sare ah oo ka socda xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa si diiran loogu qaabilay gobolka Soomaalida ee Itoobiya, iyadoo laga wada-xaajooday ganacsiga iyo ammaanka.” Ayaa lagu yidhi qoraalka kooban ee lagu faafiyey Twitter-ka Wasaaradda Khaarajiga Somaliland.
Shirka labada dhinac yeesheen oo si rasmi ah u furay shalay, ayaa lagu falanqeeyey sidii Somaliland iyo Itoobiya isaga kaashan lahaayeen dhinacyada ammaanka, ganacsiga iyo horumarka, isla markaana wadashaqayn buuxda looga yeelan lahaa arrimahaas.